Top 5 Cities With The yasebusuku Best EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 5 Cities With The yasebusuku Best EYurophu
Ukuhamba ukubona izinto yi ukhetho omkhulu - kodwa ukuba ufuna ukuba wonwabe? Kwityala, kukho imizi ne yasebusuku best, kunye nokufumana apho ngololiwe bangasukela.
Kuba izilwanyana party, akukho nto kakhulu ezifana abafumana i yasebusuku somzi entsha. Eyona nto intle ngokwenza ngayo eYurophu kukuba yonke sixeko a vibe eyahlukileyo. Thatha ujongo kwi phezulu 5 imizi ne yasebusuku intle, nibone ukuba nguwuphi wayonwabela kakhulu:
1. Berlin kaThixo yasebusuku, Jemani
Uya kufumana iBerlin kwiPhezulu 5 Cities ne yasebusuku kakhulu isizathu. Esi sixeko umboniso clubbing oludlamkileyo bexambulisana ukuba nanto eYurophu. IBerlin inomtsalane kwizinto ezininzi ezinje izilwanyana zepati. Yiyo loo nto loo nto phantse isiqinisekiso ukuze abe nexesha okulungileyo omnye kwiiklabhu yayo emininzi. Berghain Iqinisekile ukuba yeyona klabhu yasebusuku idume kakhulu, kunye neyona ikhethekileyo kunye nezinye, Ndingathi eyona nto ibalaseleyo eYurophu. Xa isityalo amandla, ngoku nombindi clubbing isimo Berlin kaThixo. Awukwazi miss ukutyelela kuyo xa ukhangela ixesha elikhulu! Ngethamsanqa, wafika eBerlin ngololiwe kulula - ungafumana khona ukusuka Amsterdam, London, no Frankfurt, phakathi kwezinye izixeko.
2. Amsterdam kaThixo yasebusuku, i elamaDatshi
Amsterdam yenye izixeko ezidinga igama yalo njengelinye engcono ukuya emathekweni. Yinto a popular indawo ekuyiwa kuyo, ngokukodwa abathandi lithongo, Techno, ihip-hop, deep house, no EDM. Ezinye ezibaluleke kakhulu iindawo ukuze ukuhambela la Warehouse Elementenstraat no Sugar Factory. Zombini ezi Amaqela amakhulu ukuya emathekweni kwi, kuxhomekeke into oyithandayo. Enye into kukuba Qiniseka - amaqela zasendle. Kwiiklabhu musa bavale de 3 okanye 4 a.m., ngoko kukho nexesha axhamle. Fikelela Amsterdam ngololiwe nakweyiphi ezinkulu imizi yaseYurophu ezifana Berlin, Paris, London, no Brussels.
3. Stockholm, Swiden
Kule laseScandinavia ebandayo, zombini bendawo kunye abakhenkethi nazi ukuba luthi indlela. Stockholm phakathi kwezixeko kunye yasebusuku ilungileyo ngenxa ezahlukeneyo neentonga nje, izihlwele ezikhulu kuzo. Kitchen lesihogo yindawo awukwazi miss Stockholm, ngoko qiniseka ukuba ukhangela ngaphandle. Esi sixeko lulula kufikelelwe ngololiwe kwezinye izikhungo rail European.
4. eRoma, ElamaTaliyane
umoya imbali unique kweRoma iphucula umgangatho clubbing emzini. Quintessentially Italian, ngamava clubbing ku eRoma unendawo ethile ubomi onothando, charm kalula kuyo. imigangatho dance Big, bartenders friendly, kunye nomoya fun ukwenza yasebusuku waseRoma nakho okumangalisayo. Elinye lawona macandelo aphambili malunga nokutyelela i-Itali kukuba kukho baninzi ekhwela uloliwe. Banako ukufumana nawe naphi na apho ufuna ukuya. Abanye babo baya kukuphatha kwiindawo ezintle apha endleleni.
ELondon iye isigcawu eyahlukileyo clubbing ukuba asibeke phakathi kwemizi emihlanu aphezulu kunye yasebusuku kakhulu eYurophu. Ungatyelela utshwala enhle, ibonisa burlesque, iiklabhu Retro, kunye nantoni na phakathi. Yindawo enkulu iqela, kwaye siya eLondon ngokuthi Uloliwe ziyasebenziseka ezininzi iidolophu ezinkulu yaseYurophu. Musa akakuphosi London amava clubbing!
Ready for uhambo lwakho olulandelayo iqela-efuna? Top wethu 5 Cities kunye yasebusuku Best eYurophu uya ukudanisa nawe, enoba ubavelele phambi kwabo. Incwadi amatikiti etreyini yakho kwaye onwabele fun nomculo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#iklabhu London yasebusuku Party tips uloliwe travelamsterdam travelengland travelgermany travelnetherlands